Dib-u-eegista Tamarta Sistem Guriga Afhayeenka 7 | War gadget
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Sawir iyo dhawaq, Reviews
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn aad u qaas ah, iyo markale ka soo baxay gacanta asxaabta Tamarta Nidaamka. Gudaha buugga weyn ee alaabooyinka laxiriira dhawaaqa iyo muusigga, markan waxaan dooranay mid si gaar ah dareenkeenna u soo jiitay, Afhayeenka aqalka 7.
Miyaad u maleysay in la gaaray waqtigii CD-yadaada? Ma jiraan wax xaqiiqda ka fog. Sida aan ognahay, habka dhageysiga muusiggu aad ayuu isu beddelay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Ka sokow taas waxaan hadda ka doorannaa muusikada barnaamijyada iyo liistada qulqulka. Xitaa qaabka jireed laftiisa waxba kuma laha sidoo kale. Si loo daboolo baahida sii kordheysa, Sistem Tamarta ayaa na siisa badeecadan.
1 Energy Sistem Home Speaker 7, waa fursad kale oo CD-yadaada ah
2 Kani waa Gudoomiyaha Guriga Tamarta Sistem 7
2.1 Cutubka dhexe
3 Hadalka Guriga 7, u adeegsiga dhammaan muusikadaada
5 Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Tamarta Sistem Gudoomiyaha Guriga 7
5.5 Fikirka Tafatiraha
Energy Sistem Home Speaker 7, waa fursad kale oo CD-yadaada ah
Qalabka Guriga ee 7 Qalabka dhawaaqa ee ka socda Nidaamka Tamarta, wuxuu leeyahay xiriir buluug ah oo casri ah jiilka. Isku xirnaanta u oggolaanaysa dhawaaq deggan oo tayo leh adigoo isku xiraya qalab kasta. Laakiin sidoo kale, oo kani waa war, stereo-kan waxaan ku dhagaysan karnaa CD-yada aan jecel nahay. Miyaad u maleysay CD-yadaada inay dhamaadeen? Weli maahan! Iibso Tamarta Nidaamkaaga Tamarta Guriga Audio 7 hadda on Amazon.
Sistem Tamarta, illaa dAfhayeenka guriga 7, wuxuu badbaadinayaa qaabka CD-ga jirka khaanadahayaga. Iyada oo alaab ah oo si fiican isugu dhafan raaxada muusig ka ciyaar qalab kasta. Y iyada oo dheeri ah oo qaab ciyaare CD ah taas oo siinaysa faa iido muhiim ah kuwa u ooman qaabka jir ahaaneed.
Hadaad ka fikirto, imisa sano ayaad gurigaaga ku soo iibsatay rikoodh? Waqtigaan la joogo sida aan u dhagaysanno muusikada wax xiriir ah kuma lahan sidii ay ahayd toban sano ka hor. Laakiin yaan guriga ku haysan raxan CD ah oo murugo leh? Hadda, marka lagu daro inaad ku raaxeysan karto qulqulka muusikada madal kasta. Iyo awoodda ku xirmaan taleefankeena casriga ah ama kaniiniga habka ugu hufan. Waxaan sidoo kale nolosha ku soo qaadan karnaa CD-yadaas in aan iibsanay maalintiisa.
Kani waa Gudoomiyaha Guriga Tamarta Sistem 7
Jir ahaan, qalabkan loogu talagalay muusikada masaafada ka fog kuwa ku hadla caadiga ah iyo qalabka in aan ka kasban karno shirkad kasta. Runtii waxaan hor joognaa qalab muusig oo dhameystiran. Waxaa dhiirrigeliyay kooxahaas muusigga ah ee sida aadka ugu guulaystay, lagu baabtiisay maalintoodii "silsilado yaryar". Qaab u xaaqay waxyeelada kooxaha waaweyn.
Afhayeenka Aqalka Tamarta Sistem 7 waa set oo ah 3 shay. ka "dhexe" ama qaybta ugu weyn halka aan ka helno taabashada taabashada, dekedda laga galo iyo kuwa laga baxoiyo CD akhristaha. Iyo laba afhayeen oo madaxbanaan in aan wada dhigi karno ama gooni gooni ah. Laakiin adigaiyada oo la tixgelinayo in isku xirka ku hadlayaasha iyo qaybta ugu weyni ay tahay xarig. Marka dhaqdhaqaaqoodu wuu xadidan yahay. Meel xun?
Dhinaca hore, oo leh a naqshad xarrago leh oo aad u taxaddar badan, waxaan helnay laba dhammaad oo kala duwan. Si qotodheer ayaa loo qeybiyay, waxaan aragnaa sida qeybta hoose ay ugu dhammaatay qalabka macdanta ah. Dhexdeeda waxaan ka helaynaa a Badhanka jirka si loo furo saxanka DC iyo dib u ciyaarista iyo xakameynta menu. Intaa waxaa dheer, dhinaceeda waxaan ku leenahay a Dekedda USB, iyo mid kale aqbasho analogga ah ee 3,5 mm fiilada mini mini.
Dusha sare xagga hore, ku dhammaatay caag madow oo dhalaalaya waxaan helnay shaashadda. Shaashadda hoosteeda ayaa ah saxanka CD player. Waxaan sidoo kale ka heli badhanka dabka / dabka Qalabka. Iyo wheel loogu talagalay xakameynta mugga, kaas oo aan sidoo kale u isticmaali karno inaan ku dhex marno liiska ama la socono saldhigyada. Gadaal waxaan leenahay xarigga korontada, iyo labada gasho ee isku xidha kuwa ku hadla.
Haddii aan eegno kuwa hadla waxaan aragnaa sida dhismihiisu waa aasaas. Iyadoo jirka alwaaxa iyo birta madow oo ka samaysan alaab dharka ka samaysan oo ku jirta qaabka ugu dambeeya ee retro. Muuqaalkeedu runtii waa mid soo jiidasho u leh fudeydkiisa. Iyo mahadsanid a naqshad yar oo garis ah iyo classic si fiican ugu habboon doonaa gees kasta guri kasta.
Cabbirka ku hadlayaasha ayaa ka dhigaya kuwo si fudud "ugu nugul" shelf kasta ama shelf. Iyada oo leh dhererka 220mm iyo ballaca 180mm, cabirradooda ma noqon doonto dhibaato inaan ku dhigno meesha aan dooneyno. Dabcan, waa inaanan ilaawin taas Hadliye kasta wuxuu leeyahay fiilo ay tahay inaan ku xirno qeybta dhexe. Isku xiraha fiilada ayaa ah mid aad u fudud oo leh "guji" dhamaadka aan saari karno oo aan ka saari karno ilbiriqsi.
Iibso Tamarta Sistem Home Audio 7 hadda Amazon adoo raacaya bilaash
Hadalka Guriga 7, u adeegsiga dhammaan muusikadaada
Haysashada qalab lagu ciyaaro muusikada, marka lagu daro samaacadaha dhegaha, waa lagama maarmaan guri kasta. Markii aan iibsaneyno afhayeenka waxaan tixgelin siineynaa waxyaabo dhowr ah. Naqshadeynta, awoodda, is-maamul, iyo dabcan, qiimaha. Afhayeenka Guriga 7 xoogaa ka mid ah dhismayaashaas waa la calaamadeeyay maxaa yeelay wuxuu ku yaalaa qayb kale oo suuqa ka mid ah. Hadda, kiiskan Kani ma aha afhayeen la qaadan karo.
Qalabkan ayaan ka helaynaa stereo go'an oo duug ah, laakiin leh ciyaar wanaagsan. Iyadoo leh cabbir iyo naqshad ay jecelyihiin bilowgii. Iyo wax walba oo ka sarreeya, oo leh qiime ka dhigaya mid xiiso leh iyo ikhtiyaar dhab ah oo lagu buuxiyo gurigeenna muusikada aan aad u jecel nahay.
Mid ka mid ah qalabka ka geddisan qalabka kale ee maqalka waa iyada gacanta fog. Remote yar oo sameeya uma baahnin inaan la macaamilno kooxda lafteeda waqti kasta. Marka lagu daro inaan awood u leenahay inaan ka xakameyno muusigga muusikada bluetooth-ga casriga, qalabka fog waxaan sidoo kale xakameyn karnaa inta ka hartay korontada ay bixiso. Halkan waxaad horey uga iibsan kartaa Nidaamka Tamarta Guriga ee Codka 7 on Amazon qiimo aad u xiiso badan.
Waxaan ciyaari karnaa muusig, sidaan horayba uga faallaynay leh CD. Intaa waxaa dheer, ciyaaryahanka ayaa sidoo kale dhejiya CD-yada lagu duubay Qaabka MP3. Iyada oo loo marayo ah Dekedda USB in aan ka helno wejigiisa waxaan muusikada uga darsan karnaa pendrive ama Memory dibadeed. Oo ay la socdaan aqbasho USB ah, waxaan sidoo kale ka heli 3,5mm jack gelinta analogga halkaas oo aan ku xidhi karno qalab kale oo dibadeed.
Dabcan waan haynaa isku xirnaanta Bluetooth, fasalka 2 oo leh 2.4 GHz soo noqnoqoshada shaqeynta oo leh a ilaa 10 mitir ka fog Iswaafajinteeda dhammaan astaamaha waxay kuxirantahay isku xirnaanta codka xasiloon bilaa gooyn ama hakad.
Muuji in Tamarta Sistem Home Speaker 7 waa ku qalabaysan raadiyaha FM. Dheeraad ah oo ku dhowaad ilaaway inta badan soo saarayaasha. Taasna, gaar ahaan aalad go'an oo sidan oo kale ah, aad ayaa loo qiimeeyaa. Waxeey heesataa Heerka inta jeer ee FM: 87,5 ~ 108MHz. Waxaan leenahay ilaa 50 horudhac hore u raadinta otomaatiga ah. Oo waxaan sidoo kale ku habeyn karnaa raadintayada gacanta.
Tusaale Afhayeenka aqalka 7
Potencia 30 Watts - 2 x 15W 4 "Ku Hadlayaal Range Buuxda -
Ciyaartoy CD CD-R CD-RW MP3 la jaan qaadaya
Bluetooth Fasalka 2 oo leh 2.4 GHz inta jeer
Gaar ilaa 10 mitir
Gelinta analogga 3.5mm jaakad
Radio FM HAA oo leh 50 horudhac ah
Kontoroolka fog SI
Cabirka afhayeenka X x 180 220 120 mm
Cabirka cutubka dhexe X x 154 127 253 mm
Qiimaha 99.90 euros
Xiriirinta wax iibsiga Tamarta Nidaamka Guriga Audio 7
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Tamarta Sistem Gudoomiyaha Guriga 7
Naqshad taxaddar leh muuqaal quruxsan oo fudud oo ku habboon guri kasta.
Kala badnaanta xulashooyinka si aad ugu awoodo dhageysiga muusikada siyaabo kala duwan.
Haysashada raadiyaha FM waa qodob dheeri ah oo lagu xisaabtamo.
Xakamaynta fog oo awood u leh xakamaynta dhammaan xulashooyinka.
Naqshad caqli badan oo qurux badan
Dhamaan qaababka hal qalab
Xakamaynta waxqabadka badan
Ma aha qalab guurguura.
Kuwa ku hadla waxay kuxiran yihiin headunit-ka iyagoo adeegsanaya fiilo, taas oo xadideysa dhaq dhaqaaqa.
Waxay ubaahantahay barees oo batari malahan.
Lama qaadi karo
Fiilooyinka isku xidha dadka ku hadla
Ma laha batariga gudaha
Gudoomiyaha Guriga Tamarta Sistem 7
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Dib-u-eegista Guddoomiyaha Sistem Guriga Afhayeenka 7